Neymar Oo Fashil Dhextaagan Xilli Man City Ay Iska Xaadirisay Fiinaalkoodii Ugu Horreeyay Ee Champions League-ga – Garsoore Sports
Neymar Oo Fashil…
Laba gool oo uu dhaliyay cayaaryahan Riyad Mahrez ayaa Manchester City u diray finalkoodii ugu horreeyay abid ee Champions League markii ay goolal 2-0 ah kaga adkaadeen kooxda Paris Saint-Germain ciyaar barafeysneyd oo lagu dheelay garoonka Etihad Stadium.
Labada dhinacba guuldarooyin niyad jab leh ayey kala kulmeen tartankan xilli-ciyaareedyadii lasoo dhaafay, balse City markan waxay u talaabsatay heer aanay weligeyd gaarin iyagoo niyad jab ku riday kooxda PSG oo aan hal bartilmaameed oo goolka ku aadan sameyn 90kii daqiiqo ee cayaarta.
Manchester City oo lugtii hore kusoo adkaatay goolal 1:2 ah ayaa markan raacsatay 2:0 taasoo ka dhigan in goolal 4:1 ah ay ku adkaatay celcelis ahaan labada lug ee semi-fiinalka.
Riyad Mahrez oo loo doortay Xiddigii garoonka ee kulankan, inkastoo abaal marinta la guddoonsiiyay Ruben Diaz oo bandhig daafacasho oo heer sare ah la yimid ayaa gacan weyn ka geystay kooxdiisa Manchester City inay adkaato kulankan taariikhiga ah, Phil Foden iyo Zinchenko waxay labaduba la yimaadeen bandhigyo ilqabad leh.
Tababare Guardiola waxa uu muujiyay inuu ka maarmo weeraryahanadiisa rasmiga ah iyadoo Sergio Aguero iyo Gabriel Jesus uu cayaarta soo geliyay waqti dambe xilli aan ogsoonnahay in lugtii hore aanu gebi ahaanba adeegsan weeraryahanadan.
Dhanka PSG waxay u muuqdeen kuwo caajis badan marka ay soo weerartamaan, Neymar ayaa muujiyay inuusan mas’uuliyad qaadi karin maadaama kooxda PSG ay si muuqata u tawday cayaaryahan Kylian Mbappe oo keydka ku jiray kaddib markii uu kasoo kacay dhaawac kubka kasoo gaaray.
Weeraryahan Mauro Icardi oo cayaarayay booska Mbappe ayaa kulankan ceeboobay isagoo ahaa cayaaryahankii ugu kubbad-taabashada yaraa garoonka, marka lagu daro labada goolhaye.
Angel Di Maria ayaa la yimid bandhigyo isku dhaf intii uu cayaarta ku jiray balse waxa uu daqiiqadii 70aad qaatay kaarka cas taasoo ka dhigtay in PSG ay cayaarta ku dhammeeysato 10 cayaaryahan.
Ugu dambeyn kooxda macalin Pep Guardiola ayaa fiinalkoodii ugu horreeyay ee Champions League-ga magaalada İstanbul kula balansan midkood kooxaha Chelsea iyo Real Madrid oo habeen dambe ku cayaaraya garoonka Stamford Bridge ee galbeedka London.
Mourinho Oo Qabanaya Shaqada Kooxda AS Roma